Soosaarida Nidaamka Mashiinka Dufcanka Shiinaha iyo Warshadda | Jusheng
Automatic Wadar Dufcaddii Bacriminta fiicni
Mashiinka batching waa qaybta ugu weyn ee saldhigga qasitaanka, taas oo guud ahaan loo qaybin karaa laba hab: qiyaasta isugeynta iyo cabirka shaqsi.
Qiyaasta isugeynta guud ahaan waxay koontarooshaa xakamaynta dhululubada si ay usoo saarto qalabka. Qiyaasta isu geynta ee walxaha kasta ayaa ka saxsan metering hore dheecaanka dheecaanka. Qalabka loo baahan yahay ayaa lagu qasan yahay alaab-hayaha suunka fidsan ee hoose ka dib cabbiraadda isku xigta, ka dibna loo gudbiyo suunka u janjeera dhinaca gaadhiga suunka fidsan. Mashiinka ama baaldi qaadista.
Cabbiraad gooni ah ayaa macnaheedu yahay in walxo kasta si gooni ah loogu cabiray iyada oo loo marayo feker gooni ah oo miisaaman. Hawlahan waxaa lagu fulin karaa isla waqti isku mid ah, iyadoo la keydinaayo waqtiga cabbirka lagana dhigayo horumarka cabirka mid sax ah.
Muga iyo tirada keydka keydka ee mashiinka batching waxaa loogu talagalay iyadoo loo eegayo baahida isticmaalayaasha, guud ahaan 3-5 baaldiyo iyo 8-40 laba jibbaaran / baaldi, oo kaydin kara noocyada kala duwan ee ciid wanaagsan, ciid iyo dhagxaan.
Qaab dhismeedka mashiinka batching-ka waxaa loo qaabeyn karaa qaab dhismeedka dhulka oo saafi ah, dhisme bakhaar qeyb ahaan ama qaab dhismeedka bakhaarka oo buuxa iyadoo loo eegayo baahida isticmaalayaasha. Sababtoo ah dhererka xamuulka xaddidan ee rarka, qaab dhismeedka dhulka saafi ah ayaa u baahan isticmaalaha inuu horay u sii tuuro jaranjarada rarka. Qaab-dhismeedka silo-nuska hoose ama qaab-dhismeedka silo-hoosaadku wuxuu badbaadin karaa jiirada rarka, laakiin kan dambe wuxuu leeyahay god, sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in la qabto Si loo hagaajiyo dheecaanka godka, iyo in la hubiyo awoodda gaarsiinta ee suunka janjeedha qaadista, qalabka xambaarsan suunka u janjeera waxaa loo baahan yahay in la dheereeyo marka xagalka gudbintu uusan isbeddelin, taas oo kordhinaysa kharashka qalabka.
moodel. PLD800 PLD1200 PLD1600 PLD2400 PLD3600 PLD4800
awoodda miisaanka miisaanka (mpper) 1 * 0.8 1 * 1.2 1x1.6 1x2.4 1x3.6 1x4.8
awoodda kaydinta (mpper) 3 * 4 3 * 8 4x10 4x10 4x14 4x16
saxnaanta dufanka ± 2% ± 2% ± 2% ± 2% ± 2% ± 2%
miisaanka ugu badan (kg) 0 ~ 1000 0 ~ 1500 0 ~ 2500 0 ~ 3500 0 ~ 4500 0 ~ 6000
noocyada wax ee batching 2-3 2-3 4 4 4 4
xawaaraha gudbiyaha suunka (m / s) 2 2 2 2 2 2
awood (kw) 4-5.5 5.5-7.5 11 11 15 15
Mashiinka qaan-gaadhka ah ee la taaban karo ee PLD800 / PLD1200 waa qalab otomaatig ah oo isku-dhafan oo loo isticmaalo isku-darka mashiinka. Waxay si otomaatig ah u dhammaystiri kartaa habraacyada isku-dhafan ee laba nooc oo isu-geyn ah sida ciid iyo dhagax marka loo eego saamiga la taaban karo ee uu dejistey isticmaalehu. Mashiinkaan waxaa loo isticmaali karaa iyadoo lala kaashanayo isku darka JS500 iyo JS750 si loo sameeyo saldhig fudud oo isku dhaf ah. Waa qalab wax soo saar la taaban karo oo loogu talagalay mashaariicda dhismaha warshadaha iyo madaniga ah, goobo dhexdhexaad iyo kuwo yar yar oo dhismo ah iyo qaybo warshado precast ah. Mashiinka wuxuu ka kooban yahay habka quudinta, nidaamka miisaanka, nidaamka korontada, iwm + dareeraha, cabirkuna waa sax.
1. Miisaamida saxda ah, saxnaanta miisaanka sare; 2. Waxqabadka wanaagsan ee culeyska culeyska, miisaanku waa sax oo xasilloon; 3. Qaab-dhismeedka guud waa macquul, adag oo qurux badan; 4. Gaarsiinta waa xasiloon tahay, maaddadana si caadi ah ayaa loo bixin karaa; 5. Miisaanka 2 nooc oo isku-darka isku mar, oo leh waqti cabbiraad oo gaaban iyo wax-qabad sarreeya;
Mashiinka qaan-gaadhka ah ee la taaban karo ee PLD800 / PLD1200 waxaa lagu dari karaa moodello u dhigma si loo sameeyo dhir isku-dhafan oo isku-dhafan oo isku-dhafan oo noocyo iyo tilmaamo kala duwan leh Badanaa waxaa loo isticmaalaa dhirta wax lagu shiido ee HZS25 / HZS35 ama goobaha yaryar ee dhismaha.
Mashiinka qaan-gaadhka la taaban karo ee PLD1600 / 2400/3600/4800 wuxuu leeyahay qummanaanta batching-ka iyo saxsanaanta sare. Qalabka batching wuxuu qaataa quudinta gudbiyaha suunka ama habka quudinta xamuulka si wax ku ool ah loo hubiyo saxnaanta saamiga isku darka ee sibidhka / ciid / quruurux ama in ka badan saddex nooc oo ah ciid iyo walxaha quruurux. Moodooyinka ugu muhiimsan waa PLD1600 seddex mashiinka dufanka bakhaarka ah, PLD1600 afar mashiinka batching bakhaar. Mashiinka wax lagu dhuuqo ee shubka ah waa qalab otomaatig ah oo loo isticmaalo qaybinta tirada ee agabyo kala duwan sida ciid iyo quruurux. Waxaa badanaa loo isticmaalaa warshadaha dhismaha ee la taaban karo si loogu beddelo miisaanka maaddada gacanta ama cabbirka mugga. Waxay leedahay saxnaanta cabbirka sare, waxtarka qaybinta sare, iyo otomaatiga. Astaamaha horumarsan waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee qalabka dhameystiran ee geedka isku dhafka shubka si buuxda otomaatig ah. Iyadoo horumar joogto ah, mashiinka batching la taaban karo sameeyay a nidaamka taxane multi-kala duwan, noocyo kala duwan iyo ujeedooyin badan. Waxaa badanaa loo isticmaalaa HZS60 / HZS90 / HZS120 / HZS180 warshad batching
Astaamaha farsamada mashiinka batching la taaban karo
• Miisaan culus iyo miisaan wanaagsan, oo leh saxnaan miisaan culus;
• Xamuul unug oo leh waxqabad aad u fiican, miisaaman sax ah oo xasilloon;
• Qaab dhismeedka guud waa macquul, adag oo qurux badan;
• Waxay culeyskeedu noqon karaa 3-5 nooc oo isu-geyn ah, oo leh waqti cabbiraad oo gaaban iyo wax-qabad sarreeya;
• Dabada waxaa ku jira qalab isku dhejinaya (fur), kaas oo hagaajin kara xiisadda suunka, kaas oo habboon oo dhaqso leh;
• gariiriyeyaal ayaa lagu rakibay gidaarka dhinacyadiisa weelka ciidda iyo baaldiga culeyska baaldiga si loo fududeeyo miisaanka iyo rarka ..
Qaybo ka Mashiinka Mashiinka la taaban karo, Nidaamka Qiyaasta Wadarta Wadarta, Nidaamka isugeynta wadarta otomaatiga ah, Mashiinka Dufcaanta Isugeynta, Isugeynta Nidaamka Dufcadda, Automatic Wadar Dufcaddii Bacriminta fiicni,